Sida loo sameeyo stickers WhatsApp-ka | Hal-abuurka Online
Ka hor inta aan loo baahnayn in la dejiyo stickers ku soo galay codsiyada, in kasta oo ay badnaayeen, marar badan ay ka maqan yihiin tibaaxaha ama siyaabaha ay isu muujiyaan saaxiibada iyo qoyska. Sababtan awgeed, apps-ka ayaa soo baxay kuwaas oo oggolaaday emoticons iyo madadaalo badan in loo isticmaalo codsi kasta. Laakiin, kuwa la shakhsiyeeyay ayaa yimid oo dareenkan, qaar badan ayaa raadinaya sida loo sameeyo stickers WhatsApp, maadaama ay tahay mid ka mid ah apps-ka aan sida badan u isticmaalno. Ma taqaan sida loo sameeyo?
Markaas ayaan ku siinaynaa tillaabooyinka ay tahay inaad qaado si aad u abuurto stickers adiga kuu gaar ah WhatsApp oo ku raaxayso galabnimo abuurista naqshadahaaga.
1 Shuruudaha ay tahay inaad buuxiso si aad u sameysid stickers WhatsApp
2 Ku samee istiikarada WhatsApp-ka oo wata Sticker Maker
3 Barnaamijyada kale ee lagu dhejiyo dhejiska
3.2 Warqad dhejis ah.ly
3.3 Istiikarada Sare Sameeyaha
4 Sida loo sameeyo stickers for WhatsApp adoon isticmaalin apps
Shuruudaha ay tahay inaad buuxiso si aad u sameysid stickers WhatsApp
In kasta oo aanay ku adkaan in loo sameeyo istiikarrada WhatsApp, runtu waa taas Waxaa jira shuruudo dhowr ah oo ay tahay in la buuxiyo si loo isticmaalo. Ma aha oo kaliya, laakiin sidoo kale si aad u bilowdo.
Kuwaas waxaa lagu soo bandhigi karaa Android iyo iOS labadaba, waxayna xitaa ogolaadaan kuwa kale inay ku raaxaystaan.
Laakiin waa maxay shuruudaha ay tahay in la buuxiyo? Waxaan ka hadalnaa:
Sooyaal hufan. Waa muhiim in dhammaan stickers lagu sameeyo asal hufan.
Qaar ka mid ah cabbirada saxda ah. Gaar ahaan, 512x512px. Tani waxay ka dhigan tahay in sawirada mobilada ee inta badan ah kuwa aan rabno inaan isticmaalno, aan noo adeegin sababtoo ah way ka weyn yihiin. Taas macnaheedu ma in aynaan ka faa'iidaysan karin? Ma aha in sidoo kale, laakiin kaliya uploading image iyo samaynta in size noqon doonaa in ka badan ku filan.
Cabbir sax ah. Waa in ay ka yaraataa 100KB. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad aragto in sawirku uu miisaankiisu yar yahay intii suurtagal ah.
Waa in ay leedahay a 16 pixel margin dhinac kasta ee dhejiska. Haddii aad ka tagto meel aad u badan sawirku wuxuu u ekaan doonaa mid yar oo haddii aad ka gudubto lama arki doono.
Ku samee istiikarada WhatsApp-ka oo wata Sticker Maker
Xigasho: Blog House Phone
Waxaan ku bari doonaa sida loo sameeyo stickers aad WhatsApp isticmaalaya Istiikarada, codsi aad u fudud in la isticmaalo (laakin ma aha ka kaliya). Si tan loo sameeyo, waa inaad ku rakibtaa moobilkaaga.
Markaad haysato, oo aad furto, waxay kuu oggolaan doontaa inaad abuurto xidhmo cusub oo dhejisyo ah. Haa, waxaad samayn kartaa dhowr mar, taas oo kuu badbaadin doonta waqti badan. Si tan loo sameeyo, waa inaad bixisa calaamadda + oo aad magacowdaa xirmada iyo sidoo kale qoraaga samayn doona. Isla markaaba waa in aad gujisaa Create waxaana soo bixi doona sawir wata 30 stickers, taas oo ah waxa kuu ogolaanaya inaad hal mar abuurto. Dabcan, waxaad abuuri kartaa ugu badnaan 30, laakiin ugu yaraan waa 1.
Hadda waa inaad ka soo deji gallery gaaga mobaylka, ama ku sawir kamarada. Faa'iidada aad leedahay waa inaad gooyn kartaa qaybta aad rabto si aad u hesho qaybta sawirka ku xiisaysa.
Markaad gooyso, tillaabada ikhtiyaariga ah ee xigta waa inaad tafatirto sawirada adigoo ku daraya qoraal, midabyo, emojis, iwm. ka hor inta aan la dhammeynin abuurista dhejiska. Marka aad hesho wax walba, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad gujiso badhanka "Add to WhatsApp" oo si toos ah ayaa loo soo dhoofin doonaa.
Dabcan, waa muhiim in Ha tirtirin app-ka marka aad dhammayso, sababtoo ah, haddii aad sameyso, dhammaan dhejisyada aad ku abuurto way luminayaan.
Waxa wanaagsan ayaa ah in aad samayn karto xidhmooyin badan oo istiikaro ah intaad rabto, oo aad si xor ah u isticmaali karto wada hadaladaada.
Barnaamijyada kale ee lagu dhejiyo dhejiska
In kasta oo Sticker Maker uu yahay kan ugu caansan, isla markaana loogu isticmaalka badan yahay, haddana runtu waxay tahay in aanay ahayn ka keliya ee aad ku samayn karto tibaaxahaaga adiga oo isticmaalaya sawirradaada ama sawirrada internetka. Dhab ahaantii, waxaad haysataa fursado badan oo aad ku isticmaashid oo ku siin kara wax kale oo kan hore aanu samayn. Ma rabtaa inaad ogaato waxay yihiin?
Waa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu caansan si loo abuuro stickers WhatsApp. Waa bilaash, sida tii aan hore u soo sheegnay, laakiin waxay ka duwan tahay tii hore ee maktabadeeda farta qoraalka ah.
Si kale haddii loo dhigo, waxaad yeelan doontaa noocyo badan oo noocyo kala duwan ah, haddii aad jeceshahay inaad qoraal ku darto, taasoo kaa dhigi karta inaad doorato app-kan. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay suurtogalnimada badbaadinta goynta aad sameyso si aad ugu isticmaasho dhejisyada kale. Tusaale ahaan, abuurista nooc ka mid ah collage oo leh dhowr.
Warqad dhejis ah.ly
Sidoo kale lacag la'aan, waxay ka taagan tahay kuwii hore ee taas Ma aha oo kaliya in aad samayn karto stickers adiga kuu gaar ah si aad ugu isticmaasho WhatsApp, laakiin sidoo kale waxaad ku wadaagi kartaa codsiga iyo, isla mar ahaantaana, soo dejiso kuwa kale' abuurayaasha si aad sidoo kale u isticmaasho.
Waxay noqotaa bangi xirmo dhejis ah oo aad ka heli karto hanti dhab ah.
Istiikarada Sare Sameeyaha
Xaaladdan oo kale waxay u dhaqantaa si la mid ah kii hore, halkaas oo aad haysato a saldhig wanaagsan ee memes iyo stickers oo aad soo dejisan karto oo aad isticmaali karto, laakiin sidoo kale waxaad samayn kartaa adiga kuu gaar ah.
Dabcan, waxa kaliya oo loo heli karaa iOS.
La bixiyay, laakiin la yaab leh shaqada ay leedahay sida Si fudud uga saar asalka sawirada, adigoon gooyn, laakiin si toos ah ayuu u sameeyaa iyo natiijada ugu macquulsan.
Waxa wanaagsan ayaa ah inaad soo dejiso istiikarrada kale ama aad ku kaydin karto Google Drive.
Sida loo sameeyo stickers for WhatsApp adoon isticmaalin apps
Ma waxaad ka mid tahay kuwa aan si fiican ula socon mobilka si uu ugu shaqeeyo? Ma laga yaabaa in mid ka mid ah kuwa doorbidaya isticmaalka kombuyuutarka halkii ay isticmaali lahaayeen telefoonka gacanta? Mise kuwa aan rabin in mobilkooda lagu haysto codsiyo iyo codsiyo? Hagaag, malaha oo tani way ku xiisaynaysaa.
Waana in aad awooddo si toos ah ugu samee istiikarradaada WhatsApp. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad tagto nooca shabakada, ka fur browserkaaga oo fur hal-abuurkaaga.
Oo, markaad furto, waxaad ogaanaysaa inuu kuu soo baxayo sidii adigoo mobilkaaga ku jira, kaliya ka weyn. Haddii aad gujiso wada hadal kasta oo aad ku dhufo sumadda emoji, oo halkaas ka aado stickers, kuwa ugu caansan ayaa soo bixi doona laakiin, agtooda, sidoo kale badhanka Abuur. Daqiiqada aad siiso, shaashad ayaa furmi doonta taas oo ay tahay inaad u sheegto sawirka aad rabto inaad ka shaqeyso si aad u abuurto warqad dhejis ah.
Xaqiiqdu waxay tahay in ay aad u fududahay sababtoo ah waxaad ku dari kartaa qoraal, gooyn, dhejin kartaa dhejisyo badan, rinji oo xitaa gooyn kartaa oo gooyn kartaa. Marka shaqada la dhammeeyo, garaacista fallaadha cad ayaa soo diri doonta. Oo ma kula tahay inaadan haysan doonin? Hagaag, waad qaldan tahay, sababtoo ah waa la badbaadin doonaa, haddii aad haysato mobilada Android ama iOS.
Hadda waxaad aragtaa sida ay u fududahay in lagu dhejiyo WhatsApp-ka, kaliya waa inaad shaqo gasho. Weligaa ma samaysay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida loo sameeyo istiikarada WhatsApp